Nhau - Alibaba inodzosera Tmall muSoutheast Asia, Lazada brand mall LazMall yakagadziridzwa
Alibaba inodzokorodza Tmall muSoutheast Asia, Lazada brand mall LazMall yakagadziridzwa
Mutambo wegore negore weLazada 9.9 wekutenga wakaparurwa zviri pamutemo munyika nhanhatu dzeSoutheast Asia. Zvakasiyana nemakore apfuura, Lazada yakazivisa zviri pamutemo kukwidziridzwa nyowani kwayo inotungamira brand mall LazMall, panguva yemutambo wekutenga 9.9 gore rino. Batsira zvigadzirwa, vatengesi uye vanobvumirwa vanogovera vanobatana nevatengi vanopfuura mamirioni makumi manomwe vashandisi vanoshanda pachikuva cheLazada kuvaka e-commerce chikuva chemakambani epasi rose kuhwina musika weSoutheast Asia
Lazada inoonekwa seye Southeast Asia vhezheni ye "Tmall", inova mhando nyowani yekuvandudza yakatangwa naLazMall. Kunze kwekutanga mufananidzo we brand-new, zvinhu zvina zvitsva zvinosanganisira Beat the Price, Brands for You, Brand Directory, uye "Tevera" Bhatani Feature zvakaunzwawo muSoutheast Asia. Lazada yakagadzawo marongero emitemo muSoutheast Asia kuona kuti zvinhu zvinotengeswa pachikuva ndezvechokwadi.
LazMall inopa mabhenji nesimba e-commerce mhinduro, zvichiita kuti zvive nyore kune zvigadzirwa zvitsva kuvhura zvitoro muRazada. Mhando dzinogona zvakare kuisa yavo yekuvimbika chirongwa muRazada chikuva. Kubudikidza nekutsvaga, kurudziro uye LazLive mhenyu nhepfenyuro mabasa anotsigirwa neLazada yekudyidzana tekinoroji zvigadzirwa, uye neLazada's logistics infrastructure uye contract performance performance muSoutheast Asia, ichaunzira vatengi chiitiko chinoshamisa chekutenga.
LazMall ndeye online mall muSoutheast Asia. Huwandu hwevagari vemaki hwakawedzera kanopfuura kapfumbamwe kubva pakagadzwa mu2018.Muchikamu chechipiri che2020, huwandu hwezvikwata zvinopinda muLazMall zvakapetwa kanopfuura kaviri pagore, uye maodha mukota ino akapfuura katatu zvakapetwa. nguva imwecheteyo gore rapfuura.
Madhipatimendi ezvitoro uye nzvimbo dzekutenga muSouth-Asia Asia akawedzerawo mwero wavo wekupinda muLazMall. Parizvino, mazita anozivikanwa akabatana neLazMall anosanganisira 30 vatengesi muMarina Square muSingapore uye makumi mana vatengesi muSiam Center muThailand. Mhando dzakadai saMurairidzi, Himalaya, MINISO, Coyan, Starbucks uye Under Armor vakapindawo muLazMall mumwedzi mitanhatu yapfuura.
Parizvino, anopfuura anopfuura zviuru gumi nezvisere emhando dzakagara muLazMall. Sekureva kwedata, anopfuura makumi masere muzana ezvisikwa zviri paForbes yepasirese yevatengi mhando rondedzero vakagara muLazMall.
Kuti uone kuti zvinhu zvinotengeswa pachikuva ndezvechokwadi, LazMall yakagadzirawo zvikamu zvekuripa muSoutheast Asia - kana vatengi vakatenga zvigadzirwa zvisiri zvechokwadi paLazMall, Thailand neMalaysia zvichapa kusvika kashanu muripo, Singapore, Vietnam, Indonesia nePhilippines Musika uyu uchapa muripo kaviri. Uye zvakare, chikuva chinotendera kudzoka kuri nyore mukati memazuva gumi nemashanu.
Liu Xiuyun, Co-President uye Musoro weCommerce Bhizinesi Boka reLazada Group, vakati: "LazMall inoita chinzvimbo chakakosha muhurongwa hwebhizinesi reLazada. Ose maviri emuno uye epasi rose mabrandari anotarisira kuwedzera kwavo simba uye kukura muSoutheast Asia kuburikidza ne omni-chiteshi nzira. "Ticharamba tichiisa mari muzvivakwa zvakakosha zveivhu uye ruzivo rwevashandisi kutsigira vatinoshanda navo muchiso uye nekudzosera zvirinani vatengi kuSoutheast Asia."
Kubva zvave mureza e-commerce chikuva cheAlibaba Boka muSoutheast Asia mu2016, Lazada yakagadzira tekinoroji yepamberi, mashandiro uye masisitimu ekubhadhara muSoutheast Asia nerubatsiro rweAlibaba's kudyidzana kwepasi rose zano uye zvigadzirwa zvemadhijitari, muIndonesia, Malaysia, Philippines, uye Singapore. Misika yenyika nhanhatu, Thailand, neVietnam vese vakawana kusimudzira nekukurumidza.